Thanos ၏မော်ကွန်းတိုက် Blade of Gamora - Brick Fanatics
Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora
Lego တိုင်း Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ တွင်ပြသထားသော set နှင့် minifigure
06 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 179 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego တိုင်း Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? set နှင့် minifigure တိုင်းနီးပါးကို Season 1 တွင်ပြသခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားနှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? LEGO အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ပိုစတာများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Marvel မင်္ဂလာပါ
04 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 99 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဇာတျသိမျး, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, သေးသေးလေး, နံရံကပျကျွွောငာ, ဆန်းစစ်ခြင်း, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
LEGO အတွက်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်း Marvel Collectible Minifigure သည်လာမည့်ပိုစတာအသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်
Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုများသည်ဒုတိယအကြိမ်တံခါးဖွင့်ပေးသည် Marvel MOC အဖွဲ့
03 / 09 / 2021 03 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 193 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, LEGO Group, LEGO.com, Marvel ကာကွယ်သူများအတွက်, MCU, အဆိုပါကာကွယ်သူများအတွက်, အဆိုပါ LEGO Group
အခုငါတို့အားလုံး ၇၁၀၃၁ ကိုအိမ်ပြန်နိုင်ပြီ Marvel စတူဒီယိုများ၊ သင်၏လက်ကိုရယူရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
LEGO ၏ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံများကိုကြည့်ပါ Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 357 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
ယနေ့ LEGO 71031 ကိုစတင်ဆင်နွှဲရန် Marvel စတူဒီယိုများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်အသုတ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုစုစည်းပြီးပြီ
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel Blade of Thanos with Studios 'Gamora?
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 283 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုများသည်နဂါးငွေ့တန်းရှိအန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီးကိုပိုကြောက်စရာကောင်းအောင်လုပ်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Gamora ကဘယ်သူလဲ
Lego 71031 Marvel Studios Collectible Minifigures သေတ္တာဖြန့်ချီရေး
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 411 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
LEGO 12 မှအက္ခရာ ၁၂ လုံးစီတွင်မည်မျှနှင့်မည်မျှကိုရှာပါ Marvel စတူဒီယိုများစုဆောင်းနိုင်သော Minifigures များရှိသည်
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 268 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Lego 71031 Marvel Studios Collectible Minifigures ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 608 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
ပထမ LEGO Marvel Collectible Minifigures series သည် ၇၁၀၃၁ သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည် Marvel စတူဒီယိုများ၊ သို့သော်ဤစူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်များ၏စုစည်းမှုသည်ရှင်သန်နိုင်သလား
Marvelဘာဖြစ်လဲ…? startဒီနေ့စပြီ Disney+
11 / 08 / 2021 11 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 222 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Marvelဘာဖြစ်လဲ…? ပွဲ ဦး ထွက် Disney+ ဒီနေ့၊ ဒီအပိုင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်ကအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာကိုပထမဆုံးအာရုံစိုက်တဲ့ဒီနေ့